Am I a photographer? | news2dago |
news2dago 15 Martsa, 2013 10:46 Ankapobeny Rohy maharitra Verindrohy (trackback) (0)
Anisany ny nahazo sehatra ambony tokoa ny sary sy ny fakan-tsary tao aorina ny firongatry ny mpampiasa facebook. Ao tokoa mantsy no mba amoahana ny fahaiza-manao @ ity fakana sary ity. Maro rahateo no mba afaka mijery ny sangan’asa ny tena @ zany. Vokany dia mba revo koa ny anao lahy mba te ho lasa matianina @ ity fakana sary ity.
Tany amboalohany aho dia tsy mba nivaky loha firy fa fakan-tsary “sony compact” izay no mba nananako ny vadiko aza moa no tena mankafy maka sary @ izy io. Sendra nivahiny tany @ toerana iray izay aho anefa tsy nanana fakan-tsary afatsy io “sony” kely io ka noheveriko fa rehefa manana “zoom” be ny fakan-tsary dia efa ampy @ izay ilaiko ny sosy rahateo manify ka izay voatsirambiny ny tanana no novidina ka “Fujifilm s3300 zoomx26” io no azoko tany. Nisy mihitsy anefa ny fakan-tsary “DSLR” na “reflex” azoko novidina raha nanampy kely aho. Indrisy anefa fa tsy novidiko io na dia nampisafidy ahy ary ny mpivarotra. Ny tao an-doha rahateo de oe ze be “zoom” ihany no tsara hitifitra ny “Taj Mahal” rahateo no nahamaika t@ zany.LOL
Nony taty aorina anefa dia nahita tsirony maka sary satria tsara ny sary azoko t@ ilay fakan-tsary. Teo vao resy lahatra ny hiditra lalina kokoa ka nanotany an’I google @ fandehany sy hanovo fahalalana. Nianatra ary mbola mianatra moa h@ zao hay zany ity sary alaiko rehetra ity dia “art” daholo na tsara io na ratsy fa misy izany oe “lecture” izany na oe miteny ho azy ny sary hoy ny fiteny matetika. Tsy le “zoom” be no mitondra azy fa ilay olona mijery ny sary ka mahafantatra ny zavatra nalaiko sy mampiteny azy iny no maha tsara ny sary iray nalaina. Teo aho vao nahatadidy t@ za mbola tao @ T-5 ilay mampiteny sary t@ nanala cepe vao mahita famataranandro de avy de manoratra oe “il est exactement 8h du matin et Koto va à l’école”.LOL
Teo koa vao nahalala ireo « set up » maro misy @ fakan-tsary. Na dia mbola tsy tena mahafehy azy rehetra ary aloha hatreto dia efa mba kôpy ihany ny tena rehefa misy miresaka oe akaro kely ny ISO na regler-o kely ny f-number.
Ny tena mila fehezina dia ny mahay mampifadanja ilay atao oe “exposure triangle” mba tsy hanimba ny sary alaina na “over” na “under exposure”. Izany oe ny hazavana zany no tena mila fehezina tsara rehefa haka sary.
Ny tena olana tamiko dia ny nifehy ilay “depth of field” @ “bridge camera”. Hita ihany anefa ny farany rehefa nihezaka lol. Nijery tany @ google oe “how to blur background?”
mety hipetraka any Roma toa ny Rondro ary ve izy ity any aorina any?